चित्रहरु मा नील Gaiman पुस्तकालय | वर्तमान साहित्य
प्रत्येक "व्यसनी" घरमा पुस्तकहरु को एक विशाल पुस्तकालय भरिएको सपनाहरु पढ्न। यो सही हो वा हामी गलत छौं? के तपाईंलाई लाइब्रेरी याद छ जुन एनिमेटेड फिल्मबाट बिस्ट थियो? सौन्दर्य र जनावर Disney बाट? म एक दिन त्यस्तो पुस्तकालयको लागि सक्षम भएको सपना देख्दै ... ठिकै, शेल्फारी वेबसाइटका केटाहरू र केटीहरूले हेर्न र फोटोहरू सक्षम भएकोमा ठूलो सम्मान पाएका छन्। लेखक नील Gaiman पुस्तकालय.
फोटोहरू बनेका थिए फोटोग्राफर काइल क्यासिडी द्वारा, जो पहिले व्यक्तिमा यी तखताहरू हेर्न आनन्दित थिए। हामी चित्रहरूमा नील गायमानको पुस्तकालय हेर्नका लागि व्यवस्थित गर्नेछौं, जुन कि त खराब छैन, हैन त?
नील गायमनले कुन पुस्तकहरू पढ्दछ?
म सधैं मनपर्दछ कि विषयवस्तु वा साहित्य विधा के हो जुन हाम्रो मनपर्ने लेखकहरूले सबैभन्दा बढी पढ्छन्। के आर्टुरो पेरेज रिभर्टेले आज महिला साहित्यको रूपमा चिनिन्छ? इमानदारीपूर्वक, म यो कल्पना गर्न सक्दिन। वा, Haruki Muakaami को मनपर्ने पुस्तक के हुनेछ? तपाईं कुन पुस्तक जलाउनबाट बचाउनुहुन्छ?
आज, यी छविहरूका लागि धन्यबाद, हामी देख्न सक्दछौं कि पुस्तकहरू नील गायमान, जो पी थिए२०१२ मा ह्युगो। र Gaiman कहाँ धेरै पुस्तकहरु राख्छ? राम्रो आफ्नो मा मिनेसोटा घरविशेष रूपमा तहखानेमा (धेरै चम्किलो हुँदैन, शेल्फारीबाट दिएको विवरण अनुसार)। पूर्ण रूपमा बुकसेल्फले भरिएको छ (विज्ञान, पौराणिक कथा, इतिहास, हास्य, लिपि, उपहार पुस्तकहरू, जीवनीहरू, आदि ...) त्यहाँ अधिकको लागि कुनै ठाउँ छैन।
तर छविहरू बोल्नुहोस् र आफ्नै लागि न्याय गर्नुहोस्। तिम्रो के बिचार छ? तपाईं वा तपाईं यस साइजको गृह पुस्तकालय पाउन चाहानुहुन्छ? यदि तपाइँ प्रत्येक फोटो थम्बनेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाइँ ठूलो छवि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यसको सट्टामा तपाई मूल लेख हेर्न चाहानुहुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस् शेल्फारी वेबसाइट कि तिनीहरूले तपाइँलाई महान विस्तार मा बताउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » चित्रहरु मा नील Gaiman पुस्तकालय
म मेरो भविष्यको घरको लागि त्यो पुस्तकालय चाहन्छु। गजबको छ
कस्तो अचम्मको कार्मेन!
के म भेडाको टाउको हटाउनेछु? भित्तामा सजावट गर्दै र फायरप्लेस थप्नको लागि गर्मीमा साँझ पढ्ने खर्च गर्न।
हो, म त्यो टाउको पनि हटाउनेछु (यो मेरो रुचि अनुसारको छैन) र म बाँकी राख्नेछु wonderful अद्भुत पुस्तकालय!